Gonzalo Higuain Walaalkii ahna Wakiilkiisa oo soo gaaray London…(Maxaa soo kordhay?) – Gool FM
Gonzalo Higuain Walaalkii ahna Wakiilkiisa oo soo gaaray London…(Maxaa soo kordhay?)
Byare January 10, 2019
(London) 10 Jan 2019. Wakiilka Gonzalo Higuain ayaa iminka ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska iyadoo ay Chelsea ku rajo wayn tahay inay soo afjarto heshiiska amaahda ah ay ku soo qaadaneyso xiddiga Juventus.
31-jirka reer Argentina ayaa iminka amaah ku jooga AC Milan, balse sida muuqata wuxuu ugu dambeyn soo hayaa jidka Premier League maadaama walaalkii Nicolas ahna wakiilkiisa uu ka soo dagay Ingiriiska.
Tababare Maurizio Sarri ayaa ugu dambeyn doonaya inuu xal u helo weerarkiisa dhexe iyadoona Morata amaah loogu dirayo Milan.
Chelsea ayaa dhibaato ka heysatay dhanka weerarka tan iyo sidii uu kooxda uga tagay Diego Costa.
\_Morata, Olivier Giroud iyo Michy Batshuayi ayaa dhammaan isku wada dayay inay xaliyaan dhibaatada weerarka ee Blues balse ku wada fashilmay, Sarri ayaana iminka diyaar u ah inuu u weecdo Weeraryahankiisii hore ee Higuin kaa oo mar wada joogeen Napoli.
“Manchester City Koobab badan uma yaalaan Madxafka Kooxda.”. - Pep Guardiola
Marcos Alonso oo ku jees jeesay kooxda Bayern Munich, kadib wareysi aad u kulul uu dhawaan bixiyay